Chipiri, May 10, 2022 Chipiri, May 10, 2022 Douglas Karr
Kuve neyakakwenenzverwa uye otomatiki yekushambadzira chikuva chinhu chakakosha cheese e-commerce saiti. Pane zvinhanho zvitanhatu zvakakosha izvo chero e-commerce yekushambadzira zano inofanirwa kuendesa zvine chekuita nekutumira mameseji: Kura Rondedzero Yako - Kuwedzera kuderedzwa kwekugamuchira, spin-to-wins, kubhururuka-kubuda, uye kubuda-chinangwa mishandirapamwe yekukura zvinyorwa zvako uye kupa zvinogombedzera kupihwa kwakakosha mukukura vako vanobatika. Mishandirapamwe - Kutumira maemail anogamuchirwa, tsamba dzenhau dzirikuenderera mberi, zvinopihwa mwaka, uye nhepfenyuro zvinyorwa kusimudzira zvinopihwa uye
Kushambadzira Cloud: Maitiro ekugadzira otomatiki muOtomatiki Studio kupinza maSMS Contacts muMobileConnect
Muvhuro, March 14, 2022 Muvhuro, March 14, 2022 Manash Sahoo
Kambani yedu ichangobva kuita Salesforce Marketing Cloud kumutengi anga aine gumi nemaviri akabatanidzwa aive neshanduko dzakaoma uye mitemo yekutaurirana. Pamudzi paive neShopify Plus base ine Recharge Subscriptions, yakakurumbira uye inochinjika mhinduro yekunyorera-yakavakirwa e-commerce zvinopihwa. Iyo kambani ine hunyanzvi hwekuita mameseji enhare uko vatengi vaigona kugadzirisa kunyorera kwavo kuburikidza nemeseji meseji (SMS) uye vaifanira kutamisa nharembozha yavo kuenda kuMobileConnect. Zvinyorwa zve
SimpleTexting: Iyo SMS uye Yemeseji Mameseji Platform
Kuwana meseji yekutambirwa kubva kuchiratidzo chawakapa mvumo yekuve imwe yenguva dzekushambadzira dzakakodzera nguva uye dzaunogona kushandisa. Meseji Meseji Kushambadzira iri kushandiswa nemabhizinesi nhasi ku: Boost Sales - Tumira kukwidziridzwa, zvidzoreso, uye mashoma-nguva zvinopihwa zvekuwedzera mari Kuvaka Hukama - Ipa sevhisi yevatengi nerutsigiro neyaviri-nzira kutaurirana Ita Vateereri Vako - Kurumidza kugovera zvakakosha zvakagadziriswa uye nyowani zvemukati Gadzira Kunakidzwa - Hondo